Meinmahla Island [Wildlife Sanctuary] | Myanmar Travel Guide
by Phoebe Han on Dec 14, 2017
သွားဖူးသမျှခရီးတွေထဲမှာလုံးဝမတူတဲ့ ခံစားချက်မျိုးနဲ့ ပြန်လာတဲ့အထိတွေးတွေးပြီး အူယားခဲ့ရတဲ့ခရီးစဉ်အကြောင်း ပြောပြရရင်းကောင်းမလားလို့... ကိုယ့်လိုအရူးထ စွန့်စားရတာကြိုက်တဲ့လူတွေ လက်တို့ခွင့်ပြုပါ...
တလတခါနီးပါးလောက်မသွားရရင် မနေနိုင်တဲ့ရောဂါကြောင့် ပြီးခဲ့တဲ့လက ရောက်ခဲ့တာ မိန်းမလှကျွန်းပါ... နာမယ်လေးလှသလောက်ကြောက်စရာသိပ်ကောင်းပါတယ်...ဘာလို့များသွားခဲ့လဲတွေးမိရင် ရူးလို့ လို့ရိုးရိုးလေး ဝန်ခံပါ့မယ်... :D
ဇိမ်ခံတာတွေထက် စွန့်စားစူးစမ်းရတာတွေကို ဘယ်အချိန်ထဲကကြိုက်မိနေမှန်းမသိလိုက်တာ တယောက်ထဲ ခရီးတွေ စီစဉ်လိုက်တိုင်း သွားတာကနေပြန်ရောက်တဲ့ထိ ဟိုစပ်စပ်ဒီစပ်စပ်လုပ်တာတွေပဲများမိတယ်. :)
အခုနောက်ဆုံးပြီးခဲ့တဲ့လက သွားခဲ့တာတော့ ဧရာဝတီတိုင်း ဘိုကလေးမြို့ကနေ သမ္ဗာန် ၂နာရီကျော်လောက်စီးပြီးမှ ရောက်တဲ့ မိန်းမလှကျွန်း သဘာဝဘေးမဲ့တောပါ... ဘာတွေရှိလဲဆိုရင်.... မိချောင်းတွေ. :D sound scary right... ;)
ရှားပါးမျိုးစိပ် မိချောင်းတွေကို သဘာဝအတိုင်းမွေးမြူထားတာပါ...
ရန်ကုန် လှိုင်သာယာကားဂိတ်ကနေ ပွင့်သစ်နိုင် ရန်ကုန် ဘိုကလေးကားကို စီးပြီး ဘိုကလေးရောက်ရင် အောင်ပင်လယ် guest house မှာညအိပ် နောက်ရက် မနက်ကျတော့ ခရီးဆက်ပေါ့...
အဲ့နေရာကိုရောက်ဖို့ ဘယ်ကစ စီစဉ်ရလဲဆိုရင် ဦးဆုံး ဘိုကလေး သစ်တောဦးစီဌာနကို ဆက်သွယ်ရပါတယ်... လေ့လာရေးအတွက်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့အစအဆုံးလိုလေသေးမရှိစီစဉ်ပေးပါလိမ့်မယ်... ခရီးတလျှောက်သုံးရမှာက သမ္ဗာန်ပါ... တရက်ကို သမ္ဗာန်ငှားခ MMK 45,000, မောင်းတဲ့လူအတွက်က MMK 15,000 ပေးရပါတယ်... အဲ့မှာအနည်းဆုံး ၁ညလောက်တော့နေသင့်ပါတယ်နော်... ၂ရက်နေဆိုတော့ အိပ်ဖို့စားဖို့က..??? မပူပါနဲ့ ကိုယ်တွေလို လေ့လာရေးလာတဲ့သူတွေအတွက် အဆင်ပြေစေဖို့ NGO တခုကလုပ်ထားတဲ့ FREDA Base Camp ရှိပါတယ်... အဲ့မှာ တခန်းကို တရက် MMK 20,000 နဲ့ရတယ်... အခန်းတွေကတော့ နေသာရုံ မိုးလုံလေလုံလောက်ပါပဲ... Hi-So တွေ အိ...အား... complain များတဲ့လူတွေလုံးဝနေလို့မရပါဘူး... အဲ့လောက်ဆို အခြေအနေကိုသဘောပေါက်မှာပါ... စားဖို့သောက်ဖို့အတွက်က မနက်စာ နေ့လည်စာ ညစာအတွက် တယောက်ကို MMK 15,000ပဲ... အစားအသောက်ချေးများလို့တော့မရနော်... ရှိတာစား ဖြစ်သလိုနေနိုင်မှာ သွားပါ...
ကဲ... ဘိုကလေးသမ္ဗာန်ဆိပ်တော့ရောက်ပြီ... သစ်တော- မိန်းမလှကျွန်းလို့ စာတန်းထိုးထားတဲ့ သမ္ဗာန်ကြီးလည်းရေပေါ်မှာ အဆင်သင့်စောင့်နေပြီ... ပါလာတဲ့ Backpackတွေ အထုပ်တွေ သမ္ဗာန်ထဲ ပစ်ထည့်ပြီး.. ဧရာဝတီမြစ်ကြော တလျှောက် သမ္ဗာန်တွေ စုန် ဆန် သွားနေတာကို ကိုယ့်သမ္ဗာန်စီးပြီး လျှောက်ကြည့်ရတာ feeling ကလုံးဝပြောင်းသွားပြီ... စိတ်ထဲကနေ ငါတကယ်သွားနေပြီပဲဆိုပြီး ပြုံးမိတယ်...
သိပ်​​တော်​တဲ့ ဂိုက်​ရယ်​ သမ္ဗာန်​သမားရယ်​
၂နာရီခွဲလောက်စီးပြီး မိန်းမလှကျွန်းအစ သဘာဝဘေးမဲ့တောဆိုတဲ့ လမ်းညွှန်ဘုဒ် မြင်လိုက်တော့ ရင်ထဲ ဒိုင်းကနဲဖြစ်ပြီးသမ္ဗာန်အမိုးအောက်ကထွက်.. မတတ်ထရပ်လိုက်ပြီး မျက်လုံးတွေကလိုက်ရှာမိတယ် ဘယ်မှာလဲမိချောင်းပေါ့... သစ်တောဦးစီးကနေ နားလည်တတ်ကျွမ်းတဲ့သူတယောက်ကို ဂိုက်အနေနဲ့ထည့်ပေးလိုက်တာ.. သူရှင်းပြတော့မှ နေ့ဘက်ဆိုအကောင်ကြီးတွေ့ဖို့ သိပ်မလွယ်ဘူးဆိုတာ သိလိုက်ရတယ်...တကယ်သွားလို့အကောင်းဆုံးအချိန်က လပြည့်လကွယ် ဒီရေအတတ်အကျရှိတဲ့အချိန်ဆို မိချောင်းကြီးတွေ တွေ့ရဖို့ အခွင့်အရေးပိုများတယ်တဲ့... ကျွန်တော်သွားလိုက်မိတာ လမသာ လမကွယ်နေ့တွေဖြစ်နေတော့ baby crocs လေးတွေပဲနီးနီးကပ်ကပ်တွေ့ခဲ့ရတယ်...
စပြီ ... Wildlife..
ဒီ​ရေ​တော်​​တော်​ကျ​နေတာပါ...3Layers ဖြစ်​​နေတယ်​
ကျွန်းအစကနေ ကျွန်းထဲဝင်ပြီး based camp ကိုရောက်ပါပြီ... ကိုယ်တွေ သမ္ဗာန်ကို ကြိုနေတဲ့ မိသားတစု... အမျိုးအဆွေကိုတွေ့လို့ပျော်နေကျသလိုမျိုး... ဧည့်မျှော်နေကျရှာတာ... လက်ဖြူဆိုတဲ့ခွေးတကောင်ကတော့ အမြှီးတနန့်နန့်လေ.. :)
Base Camp မှာလုပ်ထားတဲ့ လှေဆိပ်ကတော့လွမ်းစရာအတိပဲ...
အထုတ်တွေတွဆွဲပြီး အိပ်ရမဲ့နေရာအခန်းကိုဖွင့်လိုက်တော့ စကြိုဆိုနေတာ လင်းနို့တကောင်... :) ဒါနဲ့ တခြားဧည့်သည်တွေမရောက်လာခင် ဗိုလ်ကျပြီး ရေချိုးခန်းအိပ်သာတွဲရက် ရှားရှားပါးပါးတခန်းထဲပါတဲ့အခန်း အကောင်းဆုံးလို့ယူစရတဲ့အခန်းကို အထုပ်တွေ ပြစ်ထည့်လိုက်တယ်... ဒီလိုခရီးမျိုး ဒီလိုအတွေ့အကြုံမျိုးလိုချင်လို့လာတာလေ... ပျော်တာပေါ့... အခန်းပြတင်းပေါက်နေလှမ်းမြင်ရတာ ရေချိုရေငန်တောစပ်.. ပန်းချီကားအရိုင်းတချပ်လို့ပဲ... ခံစားတတ်ရင် အရာအားလုံးလှပါတယ်... အခန်းကလုံးဝ သုံးထပ်ပြားပဲကာထားတဲ့အခန်း... အခန်းကနည်းနည်းပူတယ်... ကွပ်တိပဲ လက်ယက်တောင်ပါလာတယ်လေ... ပန်ကာရှိဘူး.. :)
အိပ်ယာခင်း ကွာကိုယ့်ယူသွားရတယ်... မှန်... ကွာကိုယ်ပါသွားရတယ်... :) တဘက်ကွာ့ကိုယ်ပဲ... ;) နေ့လည်မွဲတည့်ကျော်နေပြီဆိုတော့ ခဏနားပြီး ထမင်းစားတယ်... :) သူအရပ်သူ့ဒေသချက်သလို စားရတာ ကြိုက်တယ်... ထမင်းစားပြီး ကော်ဖီတခွက်နဲ့လှေဆိပ်နား လေလေး တရိပ်ရိပ်တိုက်နေတာကိုခံစား ထိုင်ငေးနေရတာ feel တမျိုး... :) တကယ်စိတ်ငြိမ်တယ်... ဒါမဲ့ဂနာမငြိမ်သူမို့ ထိုင်ပြီး နေရတာပျင်းသလိုရှိတော့ guest house ကထမင်းချက်ပေးတဲ့ အစ်မကြီးနဲ့လေကန်တယ်..စပ်စုတယ်လေ... နာဂစ်တုန်းကအကြောင်းတွေပြောပြတယ်.. သနားစရာပါ... တခါတခါလေ လေများတာ စပ်စုတာ မကောင်းဘူး.. အဲ့ဉာဏ်လေးကြောင့် အာချောင်တယ်လို့ တချို့က ထင်မှတ်ကျတယ်. :(
FREDA GUEST HOUSE
ညနေစောင်းတော့ daypack ထဲလိုတာတွေထည့်ပြီး အနီးနားက ရွာတွေကို တမ္ဗာန်နဲ့တရွာဝင် တရွာထွက်သွားခဲ့တယ်... ကျွန်းလေးတွေပေါ် ကျောချင်းကပ် အိမ်ခြေ ၂၀ကျော်လောက်ပဲဆောက်ထားတဲ့ တဲအိမ်လေးတွေရယ်... ရွာအားလုံးရဲ့ကလေးတွေအတွက် လယ်ကွင်းနားကမူလတန်းကျောင်းလေးရယ်... ညနေစောင်းမို့ ကစားနေကျတဲ့ ကလေးတွေရယ်... ပျော်စရာတကယ်ကောင်းပါတယ်... ကျွန်တော်သွားတဲ့နောက် အနောက်က တကောက်ကောက်လိုက်လာကျ ရပ်ရင်လိုက်ရပ် ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ကျနဲ့ ကလေးတွေနဲ့ဆော့ မုန့်ဆိုင်မှာမုန့်တွေဝယ်ကျွေးတော့ပျော်ကျတယ်... ဂျင်ပေါက်တိုင်းဆော့တယ်... အစ်မက ဆော့တတ်တယ်လားတဲ့.. ကျွန်တော် ပေါက်ကျော်မ ဂျင်လည်းကောင်းကောင်းပေါက်တတ်ပါတယ် ငယ်ငယ်ကဆို ဂျင်စို့ expert ပဲ. ;) တရွာဝင်တရွာထွက် တိုင်းမှာ သတိထားမိတာ... "ရေထဲမဆင်းရ မိချောင်းရှိသည်".. :) အဲ့လို signboard အဲ့တနေရာမှာပဲ ရှိမယ်ထင်ပါ့... အခုပြောနေတဲ့အထိ ခရီးစဉ်ရဲ့ objective ကိုမရောက်သေးဘူး... :)
One & Only မူလတန်းကျောင်းလေး..
အာ့မှာ ဆိုင်းဘုတ်..သတိရေထဲမဆင်းရ မိချောင်းရှိသည်..
မိုးစချုပ်တော့ base camp ကိုပြန်လာ dinner စား.. အဲ့အချိန်မှာ ကိုယ့်လိုရူးတဲ့ အဖွဲ့တဖွဲ့ရောက်လာသေး... ဆူညံနေရောပဲ.... :) ထမင်းစားပြီး ဂိုက်က အစ်မ ၉နာရီခွဲနော်တဲ့. :) ဆူညံနေတဲ့လူတစုကိုခဏ ကြည့်ပြီး အခန်းထဲဝင် daypack ထဲက မလိုတာတွေပြန်ထုတ်ပြီး အရေးအကြီးဆုံး torch Light ထည့်... ညနည်းနည်းအေးတော့ jecket ထည့် နာရီကြည့်တော့ ချိန်းထားတဲ့အချိန်ရောက်ပြီ.. တော်တော်လေးစိတ်ကလှုပ်ရှားနေပြီ... သွားရင်ကောင်းမလား မသွားဘဲနေလိုက်ရမလား... ဒွိဟဖြစ်မိတယ်... ဒါမဲ့စိတ်ဒုန်းဒုန်းချပြီး ငါဒီအတွက်လာတာ ဒါကိုလုပ်ကိုလုပ်မယ်ဆိုပြီး လှေဆိပ်ဆီ စဦးတည်လိုက်တယ်.... ညဘက်မှောင်မဲနေတဲ့ထဲ လှေသမားရယ် ကိုယ်ရယ် ဂိုက်ရယ် Night hunting... မိချောင်းရှာထွက်ပြီလေ... မကြောက်ဘူးဆိုရင် ညာတာပဲ... ကြောက်မိတာအမှန်ပဲ... ရူးတဲ့စိတ်တခုနဲ့ အတွေ့အကြုံရချင်တာနဲ့ စွန့်စားချင်မိတာရယ်နဲ့ သွားပလိုက်တယ်.... လှေစထွက်တော့ ဂိုက်က အစ်မ လက် ရေထဲ မထုတ်နဲ့နော်တဲ့... အဲ့အချိန်မှာ စိတ်ထဲ ဖြစ်မိတာ အခုချိန် လှေမှောက်ပြီး ရေကူးတတ်အုံးတော့ အသက်ရှင်စရာ အကြောင်းမရှိ... အောက်မှာ မိချောင်းတွေကြီးပဲ... :D ကျွန်တော်ရေလည်းမကူးတတ်သက်လား... :) အဲ့လိုမိုက်မိုက်မဲမဲရူးပလိုက်တာ.. အသက်က spare part မပါတာသိပါတယ်... :D
စပြီ .. Night hunting..
မိချောင်းတွေက ညဘက်ဆို မျက်လုံးတွေရဲရဲလေးနဲ့ပါ... Torch Light ကြီးထိုးလိုက်ရင် ရဲရဲ ရဲရဲနဲ့မြင်နေရတဲ့မိချောင်းတွေ... :) အဲ့အချိန်မှာ မျက်လုံးညောင်းလို့ ကောင်းကင်ကိုမော့ကြည့်လိုက်တာာာ. The moment took away my breath... :) ကြယ်တွေ အစုလိုက် အစုလိုက် လှလိုက်တာလေ မြင်စေချင်မိတယ်... အဲ့အချိန်မှာ အပင် တပင်က လင်းလိုက်ပျောက်လိုက်ဖြစ်လို့သေချာကြည့်လိုက်တာ.. ဘဝမှာ ဒါပထမဦးဆုံးမြင်ဖူးချင်းပဲ ပိုးစုန်းကြူးတွေ တပင်လုံးအုံပြီး X'mas Treeမှာ မီးကြိုးလေးတွေတတ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲ.. အဲ့ထက်တောင်လှပါသေးတယ်... အဲ့အချိန်မှာ ဂိုက်က အစ်မ တွေ့ပြီ တွေ့ပြီ ဆိုပြီး ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ လှေကို စက်သတ်ပြီး အနီးဆုံးထိကပ်ပြီး ၂လသားမိချောင်းကို ဖမ်းပြီး ပြတာ အူယားစရာပါ... သေချာလည်းရှင်းပြတယ်.. ကိုင်လည်းကြည့်ခိုင်းတယ်... မိချောင်းများ အကောင်သာငယ်တာ ဇက မသေးဘူး.. အမြှီးများသန်ချက် ခေါင်းကိုကိုင်ထားတော့ အမြှီးနဲ့ရိုက်တာ... ခပ်လှမ်းလှမ်းကို torchနဲ့ထိုးလိုက်တော့ နီရဲရဲတစုံ တော်တော်ကြီးတယ်. သိလိုက်ပြီ ဒါ အကောင်ကြီးပဲဆိုတာ... အဲ့မှာနပန်းမွှေးထောင်ပြီး ဖမ်းထားတဲ့ အသေးလေးကိုပြန်လွှတ် ကိုယ်တွေ အုပ်စု လစ်ပြေးလာကျတာ.. အခုတော့ ရီစရာပေါ့လေ... အဲ့အချိန်တခုခုဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ အခု တလပြည့်လွမ်းစွတ်တမ်းတခြင်းပေါ့လေ.. :P ဒါမဲ့ I'm safe by the Grace of God ပါ.. :)
Day 1 တော့ mission accomplished. :)
Day2မှာ မိုးလင်းတာနဲ့ ဘယ်သွားရမလဲ စီစဉ်တယ်... ရှေးဟောင်း မျောက်တစ်ရာဘုရားကိုသွားမယ်ဆိုပြီး ဦးတည်ခဲ့တယ်... ကျွန်းပေါ်မှာ တည်ထားတဲ့ရှေ့ဟောင်း ဒဏ္ဍရီ ဘုရားတစူပါ...သွားဖြစ်တာက အဲ့ကျွန်းလေးပေါ် mini trekking လုပ်လို့ရတဲ့ပုံစံလေးမို့ပါ... တောကျွန်းနင်းတဲ့ပုံစံပေါ့... ဒုတ်တချောင်းနဲ့ ချုံပုတ်တွေ ရှင်းပြီးသွားရတာပေါ့... အဲ့ကအပြန်မှာ ချောင်းသေးသေးလေးတွေထဲဝင်ပြီး မိချောင်းထက်ရှာသေးတယ်... အဲ့အချိန် လှေဦးပေါ်တတ်ထိုင်ပြီး လိုက်စီးတော့ ပျော်စရာပါ... စိတ်ထဲကလည်း ငါလုပ်လိုက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ သဘောကျမှူက အပြည့်ပဲ.. ချောင်းသေးသေးလေးတွေထဲဝင်သွားတော့ ကြည့်ဖူးတဲ့ discovery channelက documentry ရိုက်နေသလိုပဲ. :P babe crocs လးတွေတွေ့ဘတော်... :)
အဲ့ကနေ အပြီး ဧရာဝတီမြစ်ကြောတလျှောက် ဘိုကလေးမြို့ဆီကိုပြန်လာတာ နေဝင်ချိန် sunsetနဲ့အတူ သမ္ဗာန်ဦးပေါ်ထိုင် လေတွေ တဝကြီးရှူပြီး လှေစီးရတဲ့ feelingကိုရစေချင်မိတယ်... တကယ်မိုက်တာပါ... :) ည ၆ခွဲလောက် ဘိုကလေးပြန်ရောက်ပြီး hotel မှာ အထုပ်ချ ဘိုကလေးမြို့ကိုexplore နည်နည်းလုပ်ပြီး နောက်နေ့ကျတော့ ကားခိုးငွေ့တွေများတဲ့ရန်ကုန်မြေကိုမပြန်ချင့် ပြန်ချင်နဲ့ပြန်ရောက်ခဲ့တော့တယ်...
သွားချင်တယ်ဆို ပြောလေ... Contact No. တွေပေးမယ် လိုက်ပို့ဆိုလည်းပို့ပေးမယ်... ရုံးပိတ်ရက်တွေပေါ့... :)
..Happy Ending.. .